07 July 2007.
Dadwayne ay ciidammada gumaysigu ku dileen meelo kala duwan.
Bannaanbax wayn oo Minnesota ka dhacay.
Human Rights Watch oo warbixin ka soo saartay Ogaadeenya.
Khudbadihii iyo Warbixinadii Shirkii London ee (Xilgudashada & Xoreynta Ogadenya).
Wariyaha RX uga soo warrama jiidda hore ee dagaalka ayaa noo soo sheegay dagaalo badan oo dhex maray CWXO iyo kuwa gumaysiga Itoobiya oo ka dhacay meelo kala duwan oo Ogaadeenya ka mid ah, kuwaasoo si wayn loogu naafeeyay ciidammada saama la-luudka ah ee gumaysiga Itoobiya. Dagaalladaasi waxay u dheceen sidatan;
05/07/07 weerar mir ah oo CWXO ku qaadeen ciidammada cadowga ee ku sugan Garigo�an waxay ugu gaysteen khasaare aan faahfaahintiisa la haynin.
04//07/07 dagaal CWXO iyo kuwa gumaysiga Itoobiya ku dhex maray Bilcil-lafle, oo ka tirsan degmada Farmadow, waxaa ciidammada gumaysiga lagag dilay 4 askari, 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
Isla 04/07/07 waxay CWXO kuwa cadowga kaga gubeen hal baabuur oo Uuraal ah meesha lagu magacaabo Kurtun, oo Dhagaxbuur ka tirsan, waxaana halkaas ku naf-waayay 60 askarta Itoobiya ah oo baabuurkaas saarnaa. Waxaa isagana dhaawac xun soo gaadhay baabuur kale oo midka la gubay daba socday, kaasoo badhtanka u galay baabuurkii kale oo holcaya. Baabuurkaas denbe ayaa isagana waxaa ku dhintay 8 askari, tiro kalana way ku dhaawacmeen.
02/07/07 dagaal CWXO iyo kuwa cadowga ku dhex maray Tuulo-cawl, oo Doollo ka titsan, wacaa cadowga lagaga dlay 4 askari, 6 kalana waa lagaga dhaawacay. Ciidamma cadowgu waxay goobtii dagaalku ka dhacay kaga tageen maydka askartii laga laayay.
Isla 02/07/07 dagaal adag oo CWXO iyo kuwa cadowga ku dhex maray Afar-irridood, oo Doollo ka tirsan, waxaa ciidammada cadowga lagaga dilay 17 askari, waxaa sidoo kale halkaas lagaga dhaawacay 9 kalae. Waxay ciidammada cadowgu u kansha-waayeen inay qaataan maydka askartii laga laayay oo ay meeshii kaga carareen.
25/06/07 weerar mir ah oo CWXO ku qaadeen kua cadowga ka tirsan oo ku sugnaa Ararso, oo Dhagaxbuur ka tirsan, waxay kaga dileen inta la ogyahay 3 askari, 5 kalana way kaga dhaawaceen.
18/06/07 weerar gaadmo oo CWXO ku qaadeen kuwa cadowgu leeyahay oo ku sugnaa Tantoomi, waxay kaga dileen 5 askari, 4 kalana way kaga dhaawaceen.
Ciidammada gumaysiga Itoobiya ee xasuuqa ba�an ka wada dalka Ogaadeenya ayaa meelo kala duwan oo Ogaadeenya ka mid ah ku laayay dadwayne rayad ah oo aan waxba galabsanin.
04/07/07 Bilcil-lafle waxay ciidammada cadowgu ku dileen Maxamed Sh Muxumed oo Kismaayo lagu naanayso. Markii ay ciidammada gumaysigu dilkan gaysteen waxay sidoo kale deegaankaas ku gubeen 35 Aqal iyo hantidii taallay oo dhan. Aqallada halkaas lagu gubay waxay kala lahaa dadka kala ah;
1- Nimco Sh C/llaahi
2- Maxamuud Ibraahim Qollajow
3- Ilma Cumar Siraad, oo 5 Qoys ka kooban iyo
4- Maxamed Buraale oo isaguna 6 Qoys ka kooban isaga iyo carruurtiisa.
03/07/07 waxay ciidammada gumaysigu boobeen magaalada Farmadow, iyagoo hanti badan dadwaynaha halkaas kaga boobay. Dadkii boobkaas loo gaystay waxaa ka mid ah;
1- Deeq Maxamuud Oogle iyo
2- Nuur Cali Xayd
03/07/07 Warandhaab, oo Galadiid ka tirsan, waxay ciidammada cadowgu ku dileen Muxumed Nuur Barre, oo Ilakacase ku magac dheer. Waxay sidoo kale ciidammada cadowgu hanti badan ka dhacen dadwaynaha deegaankaas deggan.
02/07/07 meesha lagu agacaabo Boodhley waxay ciidammada gumaysigu ku dileen Maxamed Cumar.
30/06/07 waxay ciidammada nacabka ah ee gumaysiga Itoobiya ku dileen Hadha, oo ka tirsan degmada Shaygoosh dadka kala ah;
1- Xaaji Muxumed Cabdi Haayir
2- Cabdi-Madoobe Aw Daahir Shuuriye iyo
3- C/wahaab oo Gurey ku magic dheer.
Markii ay dadkan laayeen waxay sidoo kale halkaas ku gubeen Aqallada seddex reer oo deegaankaas ah, iyadoo ay ciidammada gumaysigu ka dhaceen wixii hanti ahaa ee reerahaasi lahaayeen.
30/06/07 waxay ciidammada gumaysigu Caleen ku faraxumeeyeen, ka dibna ku dileen gabadh 30 maamlmood oo kaliya umullanayd. Waxay sidoo kale gawraceen ilamihii yaraayee ay nuujinaysay.
Isla 30/06/07 ciiammada gumaysiga ayaa baabuurtooda ku gurtay wixii yaallay 16 Dukaan oo ku yaallay La-helow, oo Doollo ka tirsan. Dadwaynaha ayaa magaalada ka qaxay markii ay ciidammada gumaysigu soo galeen, ka dibna waxay ciidammada gumaysigu rarteen wixii magaalada yaallay oo dhan.
30/06/07 Hog-dugaag, oo Doollo ka tirsan, waxay ciidammada gumaysigu ku dileen nin lagu magacaabo Qalinle Muxumed Sahal
22/06/07 Karinka Qodhacle, oo Qabribayax ka tirsan, waxay ciidammada gumaysuigu ku dileen;
1- Khadar C/llaahi Guuleed iyo
2- Maxamed Jaamac Cali Xirsi
21/06/07 waxay ciidammada gumaysigu hanti badeecad iyo lacag isugu jirta ka dhaceen dadwayne ku sugan Sancadde, oo Dhagaxbuur ka tirsan, waxaana ka mid ah dadka halkaas lagu dhacay;
1- C/llaahi Cabdi Cagey
2- Sawda Abaadir
3- Asli Aw Yuusuf
4- Maxamed Axmed Macalin C/llaahi iyo
5- Aaden Aw Yuusuf Cadde
Jaaliyada Ogadeeniya ee Gobolka Minnesota ayaa isniintii qabatey Banaanbax si heer sare ah loo soo agaasimey oo ka dhan ah Xukumada Itoobiya. Ujeedada Banaanbaxan ayaa waxa uu ahaa mid loogaga soo horjeedo gumaadka ay Ciidamada Gumaysiga Itoobiya ku hayaan shacabka reer Ogaadenya ee mudada dheer dulmanayaasha ah.
Banaanbaxan, oo ahaa midkii ugu waynaa ee ka dhaca Gobolka Minnesota ee ay soo agaasimaan dad muhaajiriin ah, ayaa wuxuu kadhacay aqalka laga xukumo Gobolkan Minnesota oo lagu magacaabo �Capital House�
Bannaanbaxan waxaa lagaga cabanayay xasuuqa ba�an ee ciidammada gumaysiga Itoobiya ka wadaan dalka Ogaadeenya iyo cunaqabatanyta dhaqaale ee ay dadwaynaha ku hayaan. Bannaanbaxani wuxuu hordhac u yahay bannaanbaxyo ay Jaaliyadaha Ogaadeenya ka dhigayaan meelaha ay ku kala sugan yihiin labada toddobaad ee bishan ugu horraysa.
Hay�ada xuquuqada aadanaha u doodad ee Human Raights Watch ayaa arbacadii soo saartay warbixin dheer oo ay kaga hadlayso dhibaatooyinka bani�aadamnimada ka dhanka ah ee ciidammada Itoobiya ka wadaan dalka Ogaadeenya. Hay�adi waxay warbixinteeda ku sheegtay in ciidammada Itoobiya ay weeraro ku qaadaan tuulooyinka, isla markaana ay qasab deegaannadoodii uga rareen dadwayne ku dhaqnaa deegaanno ku yaalla gobolooda Doollo, Qorraxey iyo Jarar.
Waxaa kaloo arbixintan lagu sheegay in ciidammada Itoobiya gubaan oo burbiriyaan tuulooyinka iyo hantida taalla, isla markaana ay dadwaynaha ka moora-duugaan xoolohooda, ayna ku qasbaan inay ka guuraan meelaha ay deggan yihiin oo gayso meelo kale. Hay�adda ayaa xadgudubyadan ku tilmaantay kuwo ka dhan ah sharciga dagaalka ee dunida lagaga dhaqmo.
Warbinatan oo faahfaahsan waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijyada denbe.